သင့်ရဲ့ မနက်ဖြန် လှပပါစေ .ဘလောဂ့် မှ ကူယူပြီး ဓမ္မမိတ်ဆွေများ လှပတဲ့ အနာဂါတ် ဖြစ်စေခြင်း အကျိုးကို မျှော်၍ ဆက်လက် ဖြန်ဝေလိုက်ပါသည်.
အမည်ခံ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်များနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓအကြောင်းကို ၀ိုးတိုး ၀ါးတား မျှသာ သိသော တချို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် သိသင့်သိထိုက်သော တကယ် တန်ဖိုးရှိသော ပိုစ့်ဖြစ်ပါသည် .
မနက်ဖြန်၏ နောင်တော်ဖြစ်တဲ့ အရှင်ဒေ၀ိန္ဒာဘိဝံသရေးပို့လိုက်သည့် ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ အားလုံး ဖတ်ကြရအောင်နော်။ ဘာတွေရေးထားလဲပေါ့........
မိမိစိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ မေ့လို့မရသော စကားတစ်ခွန်းရှိ၏။ `` အရှင်ဘုရား မြန်မာလူမျိုးများဟာ ဆင်းရဲတာ ဟာတိုးတက်ကြီးပွားလိုတဲ့ ဆန္ဒနည်းလို့ပါဘုရား၊ ဘာကြောင့်အဲဒီလိုဖြစ်ရသလဲလို့ စဉ်းစား လိုက်တော့ `ပစ္စည်း ဥစ္စာဆိုတာ သေရင် ကိုယ့်နောက်မပါဘူး၊ ကိုယ့်နောက်ပါမှာက တရားပဲ၊ ဘ၀ဆိုတာ အနှစ်ရှာလို့မရဘူး၊အကာ သက်သက်ပါ၊ ဘယ်ဟာမှ အမြဲမရှိ၊ ချမ်းသာတဲ့လူလဲ သေရမှာပဲ၊ ပညာတတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲ သေရမှာပဲ´စတဲ့ တရားတွေကြောင့်ပါ၊ ဒီတရားတွေကို နာနေရတော့ လူတွေဟာ စိတ်ဓာတ် တက်ကြွမလာပဲ တိုးတက်ကြီးပွားလို တဲ့ဆန္ဒနည်းသွားကြတယ်၊ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဆင်းရဲ ကြတာ ဘုရား´´ဟူသောစကားပင်တည်း။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်က လျှောက်သောစကား ဖြစ်၏။ မိမိစိတ်ထဲမှာ တုန်လှုပ် ခြောက်ခြား သွားပါတော့၏။ ``ဟာ ဒုက္ခပဲ၊ ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကြောင့် မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ဆင်းရဲနေတယ် ဆိုပါလား၊ ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဟာ လူတွေကို စိတ်ဓာတ်ကျအောင်လုပ်နေသလို ဖြစ်နေသတဲ့၊ ဘုရား ဘုရား´´ဟု ငြီးတွားမိတော့သည်။ ထိုသူသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်၏။ ယင်းကဲ့သို့ ပြောခြင်းသည် ဘုရားမြတ်စွာကို မကြည်ညိုသောကြောင့် မဟုတ်ပေ။ ဘုရားမြတ်စွာအကြောင်းကို ခရေစေ့ တွင်းကျ မသိရှိ သောကြောင့်တည်း။
ကြီးပွားတိုးတက်ချင်သော ဆန္ဒဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ခြင်းကြောင့် လောဘဖြစ်သည်မှာ မှန်ပေ၏။ သို့သော် လောဘဖြစ်တိုင်း ဒုစရိုက်ဟု ပြောလို့မရပေ။ လောဘသည် ၂-မျိုးရှိပေသည်။ တရားသောလောဘနှင့် မတရား သော လောဘတို့တည်း။ အများအတွက် (မိသားစု၊ ရပ်ရွာ၊ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတွက်) ရည်ရွယ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်လျှင် ``တရားသောလောဘ´´ ဖြစ်၏။ (သေ၀ိတဗ္ဗတဏှာ-ဟုခေါ်၏)။ ဆိုလို သည်ကား ယင်းတရားသောလောဘကြောင့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုများ တပွေ့တပိုက်ကြီး ရနိုင်ခြင်းပင်။ ထို့ကြောင့် တရားသောလောဘသည် ဖြစ်သင့်သောလောဘတည်း။
ထို့ကြောင့် ဘုရားမြတ်စွာက ပစ္စုပ္ပန်ချမ်းသာရေးကိုအလိုရှိသူများအတွက် `` ဥဋ္ဌာန- မည်သည့် အလုပ်ကိုပဲ လုပ်လုပ် ငုတ်မိသဲတိုင် တက်နိုင်ဖျားရောက်ဆိုတဲ့ နောက်မဆုတ်တမ်းစိတ်ဓာတ် ရှိရမည်၊ အာရက္ခ- ကြွက်သေတစ်ခု အရင်းပြုဆိုသကဲ့သို့ အလေအလွင့်မရှိအောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမည်၊ ကလျာဏမိတ္တ- ဈေးကွက်ချဲ့နိုင်ဖို့အတွက် တစ်ရွာတစ်ကျီ ဆောက်ရမည်၊ သမဇီဝိတ- စီမံခန့်ခွဲမှု စာရင်းအင်းပညာကို ကျွမ်း ကျင်ရမည်´´ ဟု သမ္ပဒါတရား ၄-ပါး ကို မိန့်တော်မူခြင်းဖြစ်ပေသည်။
သာဝတ္ထိမြို့ကြီး၌ လူဦးရေ သန်း ၇၀-ရှိရာ သန်း ၅၀-မှာ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ကြ၏။ ဤအရေ အတွက်ကို ကြည့်လျှင်ပင် လူပုဂ္ဂိုလ်အများအပြား ``တရားထူးများ´´ ရကြသည်ဆိုသည်မှာ ပြောဘွယ်မရှိ တော့ပေ။ ကျန်သည့် သန်း ၂၀-ကလည်း သူတို့၏နှလုံးသားထဲ၌ ဗုဒ္ဓတရားများ ထည့်ထားကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များပင်တည်း။ ထို့ကြောင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အရိပ်အောက်မှာ ရှိသည့် သာဝတ္ထိမြို့ကြီးသည် မည်မျှလောက် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု သာယာဖွံ့ဖြိုးမှုရှိမည်ဆိုသည်ကို မှန်းဆ၍ ကြည့်နိုင်ပါသည်။ တွေးကြည့်လျှင် လွမ်းမော ဘွယ် ကောင်းလေစွာ့တကား။
ရေးသူ ရွှေကြာ အချိန် 6/22/2009 11:57:00 PM0ဓမ္မဒါန Links to this post
ဘ၀အထွေထွေကို ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ လူသားတွေဟာ လေနင်ရာ လွင့်မျောပြီး ပုံပြောင်းနေတဲ့ တိမ်တိုက်တွေ လို ဘ၀ရဲ့အနိမ့်အမြင့် ဆိုတဲ့ လောကဓံ တရားတွေဟာလည်း လူတိုင်းမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည် ။
ဒီလိုဘဲ နေစဉ်နှင့်အမျှ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ .. လဘ်ရခြင်း ၊ မရခြင်း ၊ အခြွေအရံရှိခြင်း ၊ မရှိခြင်း ၊ ချီးမွမ်းခြင်း ၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်း ၊ချမ်းသာခြင်း ၊ ဆင်းရဲခြင်း ဆိုတဲံ့ ရှစ်ပါးသော လောကဓံတရားတွေ ကို မြတ်စွာဘုရားသခင်သည်.. ဖုဋ္ဌဿလောကဓမ္မေဟိ ၊ စိတ္တံယဿ နကမ္ပတိ ၊ အသောကံ ၀ိရဇံခေမံ ဧတံမင်္ဂလမုတ္တမံ ၊ ..... လောကဓံတရားနှင့် ကြုံတွေ့လာလျှင် စိုးရိမ်ပူဆွေး ငိုကြွေးသောက မဖြစ်ဘဲ မတုန်မလှုပ် သည်းခံနိုင်ခြင်းရှိတာကို မင်္ဂလာတပါး ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဟောကြားတော်မူပါသည် ။
ဘ၀ခရီးလမ်းတလျှောက်မှာ လောကဓံမှုန်တိုင်းတွေကို ရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ စိတ်ပျက်မှု ၊ အားငယ်မှု ၊ ညစ်ညူးမှု ၊ ငိုကြွေးမှု မျိုးစုံကြုံရပါသည် ။ ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်ခွင့်မရှိဘဲ သူဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေတဲ့ လောကနိယာမထဲ ..ကိုယ့်ရင်ထဲ မွန်းကြပ်ဖိစီးနေတဲ့ ဒေါသမီးတွေ ရှိနေပေမဲ့လည်း အပြုံးမပျက် တဖက်သူအပေါ် စကားပြောနိုင်တဲ့ အကျင့်ကို မိမိတို့လေ့ကျင့်ထားရပါလိမ့်မည်။ ယောနိသောမနသိကာရဆိုတဲ့ သင့်တင့်အောင်စိတ်ကို ထားတတ်ရပါမည် ၊ လူတယောက်ဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကို စိတ်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိူင်ဖို့အတွက် အဓိက မိမိစိတ်အမြင်မှာ ကြည်လင်နေဖိုလိုအပ်ပါသည် ။ ၊ ကမ္ဘာတလွှားရှိ လူသားတိုင်းနှင့် ဘာသာတရားတိုင်းဟာ စိတ်၏ ငြိမ်းချမ်းမှု ကို ဦးတည်ကြပါသည် ရွှေကြာတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်လည်း ကံ ၊ ညဏ် ၊ ၀ီရိယ သုံးပါးစလုံးပြည့်စုံဖို့ လိုအပ်ပါသည်ဟု အထင်အရှားဟောကြားတော်မူပါသည် ။
လူဆိုတာ အမှားမကင်းတာတော့အမှန်ဘဲ အမှားပေါ် နှောင်တတွေရပြီး နောင်မမှားအောင် ဆင်ခြင်ရမည်ဆိုတာလဲ အသိလေးတွေဝင်ဖို့အရေးကြီးပါသည၊် ဒါမှမဟုတ် အမှားများလာပြန်တော့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတွေ လျှောသွားနိူင်သည် ၊။ အရာရာအတွက် မျှော်လင်ချက်တွေ ၊ ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့အချိန်မှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရှိခဲ့သလို ကျဆုံးမှုတွေနဲ့ ရောပြီးခံစားနေကြရသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့ဘူးပါသည် - ကောင်းဆုံးကိုလည်း မျှော်လင့်ထားတယ် ၊ ဆိုးဆုံးအတွက်လည်း ပြင်ဆင်ထားတယ် တဲ့ ..မျှော်လင့်ခြင်းများစွာနဲ့ အရာတခု ကို ကြိုးစားကြတယ် ကြိုးစားတဲ့အတွက် အောင်မြင်မှုကို မည်သူမဆို လိုချင်ကြသည် ကြိုးစားပါလျှက်နဲ့  မဖြစ်လာတာတွေ ကြုံတွေရင် စိတ်ပျက် စိတ်ဓါတ်ကျပြီး တချို့ဆို ဘ၀ပါ ဆုံးရှုံးသွားကြသည် ။
စိတ်ပျော်ရွှင်မှု ၊ စိတ်ကျေနပ်မှုတွေ ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါ အမှတ်တမဲ့ ကျော်လွန်သွားပေမဲ့ စိတ်ဆင်းရဲ့ ဒုက္ခနဲ့ ကြုံတွေတဲ့အခါ မခံနိူင်အောင် စိတ်ပူလောင်ပြီး စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းသည်၊ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတဲ့ တရားထိုင်ခြင်းကို လုပ်ပေးရပါသည် ၊။
မြတ်စွာဘုရားရှင် မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါသည် .. ရဟန်းတို့ အနာရောဂါဟူသည် နှစ်မျိုးအပြားရှိ၏ ၊ အဘယ်နှစ်မျိုးနည်း . ကိုယ်နာမကျန်းခြင်းနှင့် စိတ်နာမကျန်းခြင်း တို့တည်း . တနှစ် ၂နှစ် နှစ်ပေါင်းတရာ ၊တရာထက်ပို၍၄င်း ၊ ကိုယ်နာမကျန်းခြင်းမှ ကင်းရှင်းပုံရသူများသည် ရှိပေသည် ၊ သိုသော်လည်း ရဟန်းတို့ ကိလေသာညစ်ကြေးကင်းကုန်ပြီးသော ရဟန်းတို့မှအပ ခဏမျှ စိတ်နာမကျန်းခြင်းကင်းသူဟူ၍ လောကတွင်ရှားလှဘိခြင်းဟု မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါသည် .။ ၊ ဒီတော့ နေ့နေ့ညည လျှောက်လမ်းလို့ မငြိမ်းနိူင်တဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ ခရီးလမ်းမှာ ရတာလေးနဲဘဲ ရောင်ရဲမယ်ဆိုတဲ့ သဘောလေးသာမရှိခဲ့ရင် စိတ်ရဲ ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာ ဘယ်သောခါမှ ရနိူင်မှာ မဟုတ်ပါ ။
လောလောဆယ်မှာ စိတ်ခွန်အားတွေ ပြန်ပြည့်ဖို့ လိုပေသည် တရားထိုင်ချင်းဆိုသည့် ၀ိပဿနာအလုပ်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ် ကမ္မဋ္ဌာန်း စိတ်လေ့ကျင့်မှု လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး သဘာဝတရားကို ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးနောက် စိတ်၏လုံးဝလွတ်မြောက်မှုရခြင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိူင်ပါသည် ။ စိတ်တိုးတက်မှု( ဘာဝနာ )နှင့်ပတ်သတ်၍ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူသော ဒေသနာများတွင် အရေးကြီးဆုံးဒေသနာသည် ဒီဃနိကယ်သုတ် (၂၂) သိုမဟုတ် မစ္ဖျိမနိကယ် သုတ် အမှတ်(၁၁) တွင်လာသော သတိပဋ္ဌာနသုတ်ဖြစ်ပါသည် ၊ဤသုတ်တွင်ဟောကြားတော်မူသော ဘာဝနာတရားတော်သည် လောကနှင့် အဆက်ဖြတ်၍ လောကကြီးကို ရှောင်ဖယ်သွားစေရန်မဟုတ်သည်သမက မိမိတို့၏ ဘ၀နေ့စဉ်လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ ၀မ်းသာမှု ပူဆွေးမှုများ အပြောအဆို အကြံအစည်များနှင့် ကျင့်သီလ အသိဉာဏ် ဆိုင်ရာများနှင့်ပင် သက်ဆိုင်ပါသည် ။
၁။ မိမိကိုယ် ၌ ဖြစ်ပျက်မှုကို ရှုသော ကာယနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန်၊
၂။ မိမိတွေထိခံစားနေသော ဝေဒနာတခု၌ ဖြစ်ပျက်မှုကို ရှုရသော ဝေဒနာနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန် ၊
၃။ မိမိစိတ်တခု၌ ဖြစ်ပျက်မှု ကို ရှုရသော စိတ္တာနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန် ၊
၄။ ကိုယ်ကျင့်သီလဉာဏ်ပညာဆိုင်ရာ တရားစု၌ ဖြစ်ပျက်မှုကို ရှုရသော ဓမ္မနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန် ၊
ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကို ရှုမှတ်အားထုပ်ပြီး စိတ်ဓါတ်ကျစဉ် ခဏတွင်း အလွယ်လင်တကူ ရရှိကာ ဆူကြုံမြင့်တုံ လောကဓံ တရားများကိုလည်း ရွှေကြာတို့အနေနဲ့ ပိုမို ခံနိူင်ရည် ရှိနိူင်မည်ဖြစ်ပါသည် ။
လက်ဝှေးသမားရဲ့ စကားတခွန်းရှိပါသည် ... ထိုးနိူင်တာသာ စွမ်းရည်မဟုတ်ပါ ၊ ထိုးခံနိူင်တာဟာလဲ စွမ်းရည်ပါဘဲ တဲံ့ ....... ဒါကြောင့် မိမိတို့ စိတ်ကို တနေရာအတွက်သာ ပြင်ဆင်ရမှာ မဟုတ်ဘဲ လောကဓံ တရားရှစ်ပါးလုံးအတွက် ခံနိူင်ရည်ရှိအောင် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရပါမည် ဖြစ်ပါသည် ။
ရွှေကြာ . မြန်မာပြည်မှာတုံးက ပဏ္ဌိတာရာမ ရွှေတောင်ကုန်းသာသနာရိပ်သာတွင် တရားအားထုတ်စဉ် ဆရာတော်ဘုရား သြ၀ါဒ မိန့်ဆိုခဲ့ဘူးသည် ....မြင့်တဲ့သူတွေ အပေါ်မှာ ကိုယ်က နိမ့်ရမယ် ၊ နိမ့်တဲ့သူတွေ အပေါ်မှာ ကိုယ်က မြင့်ရမယ် ဆိုတဲ့သြ၀ါဒပါ. ကြိုးစားမှုကြောင့်အောင်မြင်မှု ရလို့ဖြစ်စေ ၊ ထိန်းချုပ်မှုမှ ကင်းလွတ်တဲ့ အနေနဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား တစ်မျိုးတမည် ဖေါက်ပြန်နေတဲ့ သူအပေါ်မှာဖြစ်စေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိုမ့်ချပြီး ဆက်ဆံရပါမည် ၊။ လောက လူသားတွေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုနှိုမ့်ချဆက်ဆံတာကို အောက်ကျတယ်လိုထင်နိူင်ပါသည် ၊ မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကျ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်က နိုမ်ချဆက်ဆံခြင်းသည် အသာရလိုက်တာပါဘဲ ၊ ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီး မြင့်တဲ့သူတွေ အပေါ်မှာ ကိုယ်က နိုမ့်ရမယ်ဆိုတာဖြစ်သည် ၊ နိုမ့်တဲ့သူတွေ အပေါ်မှာ ကိုယ်က မြင့်ရမယ်ဆိုတာကတော့ သီလ ၊ သမာဓီ ၊ ပညာ တရားတွေ နည်းပါးတဲံ အနေအနဲ့ နိုမ့်ကျသူတွေ ထက် ကိုယ်က သီလ ၊ သမာဓီ ၊ ပညာ တိုးပွါးအောင် အားထုတ်ကျင့်ကြံခြင်းဖြစ် မြင့်မြတ်ရပါသည် .။ .......
အခက်ခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ လာတဲ့အခါ ရှောင်လွဲရန်မကြိုးစားဘဲ တတ်နိူင်ဆုံး မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော နူးညံ့ ပြေပြစ်သောစိတ်နုလုံးကို လက်ကိုင်ထားပြီး ပြဿနာကို တခုချင်း တခုချင်းစီ ဖြေရှင်းသွားဖို့လိုပါသည် ၊။
လူတယောက်ရဲ့ ဘ၀မှာ အရေး အကြီးဆုံးက ဘာလဲ ? ၊ ကိုယ်တကယ်ဖြစ်ချင်ဘာလဲ ? ၊ ကိုယ်တကယ်လုပ်နေတာဘာလဲ? ၊ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ဘ၀နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာလဲ သိဖို့လိုအပ်ပါသည် ၊ ဘ၀လောကဓံ လေလှိုင်း တိုက်ခတ်မှုကို ကြံ့ခိုင် သန်စွမ်းမှု နဲ့ ခံနိူင်ရည် အားကို လိုအပ်သလို ပြုပြင်ပြီး ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို ကိုယ်ကလွဲ၍ ဘယ်သူမှ မသိနိူင်တဲ့အတွက် ဖြည့်စွက်ရင်း လောကဓံမှုန်တိုင်းကို ...ဖုဋ္ဌဿလောကဓမ္မေဟိ ၊ စိတ္တံယဿ နကမ္ပတိ ၊အသောကံ ၀ိရဇံခေမံ ဧတံမင်္ဂလမုတ္တမံ ၊ ..... နှင့်အညီ စိုးရိမ် ပူဆွေး ငိုကြွေးခြင်းကင်းစွာနဲ့ မတုန်မလှုပ် သည်းခံ နိူင်ကြပါစေ ။
မေတ္တာဖြင့် ရွှေကြာ .
ရေးသူ ရွှေကြာ အချိန် 6/06/2009 01:59:00 AM 1 ဓမ္မဒါန Links to this post
ရေးသူ ရွှေကြာ အချိန် 6/01/2009 04:34:00 PM0ဓမ္မဒါန Links to this post
ရွက်ဟောင်းပြုတ်၍ ကျေးနှုတ်အသွင် ရွက်သစ်ပြင်တဲ့ နွေဦး
နွေလေးလတို့တွင် ဂိမ္မာန်နွေဦး ရောက်တော့ လေဗွေမြူး၍ ရွက်ဝါ ခြောက်တွေ တဖျောက်ဖျောက်နှင့် လေထဲမှ ဝေ့၀ဲလို့ နေပြန်လေပြီ.
စိတြနှင့် မိဿရာသီ ခါညီဝေါဟာ ဂေါဇာအသစ် သက္ကရာဇ် ပြောင်းဘူး နှစ်နှောင်းဦးသားတန်ခူး ခေါသော ကာလလည်း အခုဆို ကျော်လွန်ခဲ့ပြီ .
အချိန်အခါရာသီလိုက်၍ အကိုင်းအညွှန်တွေသည် ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး ရှုမြင်၍မဆုံးနိူင်အောင် ပင်လုံးကျွတ်ပွင့်လျှက်ရှိနေပါသည်၊ လေပြင်းမုန်းတိုင်း အုတ်ဆိုင်းကတိုက်ခိုက်လာခဲ့သော်လည်း ကိုင်းချင်းခက်ချင်း ယှဉ်တွဲ လို့ - အေးယာဉ်လွဲသလို ယိမ်း နွဲကါ လေပြည်လေငြင်း တိုက်ခိုက်လာလည်း သာယာကြည်နူးလို့၊ ဖူးအညွှန့်တို့ လည်း မြူးကွန်နေကြလို့ ၊ မြူခိုးတွေလည်း အုံတ၀ိုင်းဝိုင်း ဆိုင်းတမို့မို့ မှိုင်းညို့ညို့နဲ့ နှစ်မြို့ဘွယ်ရှိလှသော တောအုပ်ကြီးသည် စိမ်းလမ်းစိုပြေနေတဲ့ ရေတံခွန်နှင့် တိုက်ခိုက်လာသောလေ၀ှန်းကြောင့်ဝါရောင် ရွက်ဟောင်းများကြွေကျလို့ ၊ ကျေးနုတ်သီးအသွင် ရွက်သစ်တွေပြင်လို့ ၊ ပင်ငယ်လေးတွေတမျိုး ၊ ပင်ကြီးတွေတဖုံ ၊ ပင်အလတ်တွေတချို့ ၊ ကင်ငုံစို့ တွေနဲ့ အချို့ကြီးရင့်လို့ အချို့က သီး လို့ ၊အချိုက ပွင့်လို့နေသဖြင့် သင်းရနံ့တွေ မြိုင်ဟေမ၀န် တခုလုံး တကယ်ဘဲ နှင့်သက်ဖွယ် ရှုချင်ဖွယ် တင်တယ်လှပသော တောအုပ်ကြီးတခု လို ၊ ခန္ဓာကိုယ်မှာလောင်မြိုက်နေတဲ့မီးတောက်ကြီးကို တားဆီး ငြိမ်းအေးစေတဲ့ နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်ကိုရောက်စေတဲ့ အဲဒီတော အုပ်ကြီး သဘွယ်တင်တယ်လပှစွာ နဲ့ ကလျှာဏ သုံးစုံ သဒ္ဒါလင်္ကာရ၊ အတ္တာလင်္ကာရ ၊ဆိုတဲ့ ပန်းရနံ့နှင့်ပြည်စုံသော ၀ိမုတ္တိရသ တပါးပြပြီး ၊ ဓမ္မ ၀ိနယ နှစ်ပါး ၊ ပိဋကတ်သုံးပုံ၊ငါးရပ် နိကယ် ၊ အင်ကိုးသွယ် နှင့် အကျယ်ပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဓမ္မက္ခန္ဓာပေါင်းရှစ်သောင်းလေးထောင်ရှိတဲ့ ပရိယတ္တိတရားတော်မြတ်ကြီးဟာ လောကုတ္တာအစီးပွါးကို ဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည် ။
၀နပ္ပဂုမ္ဗေ ယထ ဖုဿိတဂ္ဂေ၊
ဂိမှာန မာသေ ပဌမသ္မိ ဂိမှေ ။
တထူပမံ ဓမ္မ၀ရံ အဒေသယိ၊
နိဗ္ဗာနဂါမိံပရမံ ဟိတာယယ ။
(ကိုးဆောင်ဆရာတော်ဘုရားရေးသားတော်မူသော ရတနာသုတ်အနက်ကို ကိုးကား၍မျှဝေပါသည်)
လူ့ဘ၀သည် အမွန်မြတ်ဆုံးဖြစ်ပေသည် ၊ မိမိကိုယ်ပိုင် အရှင်သခင်ဖြစ်၍ ကိုယ့်ဘ၀ဖြစ်စဉ်ကို စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန် မည်သည့် တန်ခိုးအာဏာရှင် အထက်ပုဂ္ဂိုလ်များမဟုတ်ပေ ။ မိမိသည်သာလျှင် မိမိကိုးကွယ်ရာဖြစ်၏ ။ မိမိမှ တပါး အဘယ်သူသည် မိမိ၏ ကိုးကွယ်ရာ ဖြစ်နိူင်ပါအံ့နည်း ဟု ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက မိတ်ခဲ့လေပြီ . မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်ရဟန်းတို့အား "မိမိကိုသာ အားကိုးကြလေ၊ အခြားတပါး၌ ကိုးကွယ်ရာမရှာလေနှင့်" ဟူ၍ သြ၀ါဒ ပေးခဲ့လေသည် ။
လူသားအားလုံးတို့သည် ကိုယ်ပိုင် ကြိုးစားမှုနှင့် ပင်ကိုယ်ဉာဏ်အားဖြင့် အနှောင်အဖွဲ့အားလုံးတို့မှ လွတ်မြောက်နိူင်စွမ်းရှိ ပါသည် ။ မြတ်စွာဘုရားသည် ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအား မိမိ တိုးတက်ရေးနှင့် လွတ်မြောက်ရေးကို မိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးပမ်းယူရန် အားပေးလှုံဆော်သွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ပေသည် ။ "သင့်တို့ကိုယ်တိုင် အားထုတ်ကြရကုန်မည် ၊ ဘုရားရှင်တို့သည် လမ်းကိုသာ ညွှန်ပြကုန်၏ "ဟူ၍ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်က မြွက်ကြားတော်မူ၏ ။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအား "ကယ်တင်ရှင်" ဟု ခေါ်တွင်ရမည် ဆိုပါလျှင် လွတ်မြောက်ရေးစခန်းဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ သွားရာ ခရီးလမ်းကြောင်းကို ရှာဖွေတွေ့သူနှင့် လမ်းညွန်ပြသူ အဖြစ်ဖြင့်သာ ခေါ်ဆိုကြမည်ဖြစ်ပေသည် ။ နိဗ္ဗာန်သို့ ဆိုက်ရောက်ရန်မှာ ဤခရီးလမ်းကြောင်းအတိုင်း ရွှေကြာတို့ နှင့်အတူ ဓမ္ဓမိတ်ဆွေများ ကိုယ်တိုင်လျှောက်လမ်းကြရပေမည် ။ မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်တော်တွင် မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် တပည့်သားသံဃာတော်များအား ချုတ်ချယ်ထားရန် စိတ်မကူးခဲ့ကြောင်း သံဃာတော်များကလည်းမြတ်စွာဘုရားအပေါ်တွင် မှီခို မနေစေလိုကြောင်းတို့ကို ဟောကြားတော်မူခဲ့ပေသည် ။ တရားတော်မြတ်တွင်လည်း ထိန်ချန်ဖုံးအုပ်ထားသည့် အချက်ဟူ၍မရှိ ၊အာစရိယ မုဋ္ဌိခေါ် ဆရာ့-လက်ဆုပ် လက်ကိုင်ဖြစ်၍ တပည့်တို့အား မသင်ကြား မပြသဘဲ ကွယ်ဝှက်ထားသည်ဟူ၍ မရှိ ၊ " ဆရာ စားချန်ထားသော အကြောင်းများ မရှိ" ဟု မြတ်စွာဘုရားက ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် တဦးတယောက်စီ ကိုယ်တိုင်တာဝန်ခံယူခြင်းယူသော အကျင့်စဉ်မူအရ တပည့်သံဃာတော်တို့အား လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေထိုင်ခွင့်ကို ပေးတော်မူခြင်းဖြစ်လေသည် ။အဲဒီလို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ခွင့်ဆိုသည်မှာလည်း လွတ်မြောက်ရေးသည် သစ္စာတရား ကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေ ရယူနိူင်ခြင်းအပေါ်တွင်သာ တည်ရှိပါသည် ။မည်သည့် နတ် ဘုရား ၊ တန်ခိုးရှင် တို့ကမှ သူတို့၏ သြဇာခံ၍ ကောင်းမွန်စွာ ကျင့်ကြံသည့်အတွက် ဆုလာဘ်အဖြစ်ဖြင့် ချီးမြင့်နိူင်သော အရာမဟုတ်ပါ။
အခါတပါး၌ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ကောသလပြည် ကေသပုတ္တ မြို့ငယ်တခုသို ရောက်ရှိလာခဲ့ သည် ။ ဤမြို့နေ လူအပေါင်းကို ကာလာမအမျိုးနွယ်များဟု ခေါ်တွင်ကြလေသည် ။မိမိတို့ မြို့တွင်းသို့ မြတ်စွာဘုရား ရောက်ရှိလာကြောင်းကြားသောအခါ ကာလာမအမျိုးသားတို့သည် မြတ်စွာဘုရားထံသို ဆည်းကပ်၍ ဤသို့လျှောက်ထားကြ၏ ။
" အရှင်ဘုရား ကေသပုတ္တသို့ ရသေ့ပုဏ္ဏား အချို့တို့ ရောက်ရှိလာကြပါသည် ။ သူတို့သည် သူတို့၏ အယူဝါဒများကိုသာ ရှင်းလင်းပြကြ၍ ထင်ရှားစေကုန်ကြပါသည် ။ သူတပါး၏ အယူဝါဒများကို မထီလေးစားပြုကြပါသည် ။ ရှုတ်ချကြပါသည် ၊ ပစ်ပယ်ကြပါသည် ။ ဘုရားတပည့်တော်တို့မှာ ကြည်ညိုလေးမြတ်ဘွယ်သော ဤရသေ့ပုဏ္ဏားများတွင် မည်သူက အမှန်စကားပြော၍ မည်သူက မမှန်စကားဟောသွားကြသည်ကို မဝေခွဲနိူင်အောင် အစဉ်စိတ်ရှုပ်ပွေကာ သံသယဖြင့် တွေဝေလျှက် ရှိကြပါသည်ဘုရား "
ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက ဘာသာရေးရာ သမိုင်းတလျှောက်တွင် ထူးထူးခြားခြား ပြိုင်ဘက်ကင်းသည့် ဤသြ၀ါဒကို မြွတ်ကြားတော်လိုက်လေပေသည် ။................ " ဟုတ်ပေသည် ကာလာမ အမျိုးသားတို့ ၊ ယုံမှားဘွယ်ရာ ကိစ္စတွင် သံသယဖြစ်ပေါ်လာသော ကြောင့်သင်တို့သည် ယုံမှားသံသယရှိသင့်ကြပေသည် ။စိတ်ရှုပ်ပွေခြင်း ဖြစ်သင့်ကြပေသည် ။ယခု ရှုကြပေလော့ကာလာမအမျိုးသားတို့......."
သတင်းစကားကို ကြားရုံမျှဖြင့် နားမယောင်နှင့် ၊ အစဉ်အလာဖြစ်ပေသည်ဟူ၍လည်း လက်မခံနှင့်၊ လူပြော သူပြော တဆင့်စကားကိုလည်း မယုံလေနှင့် ၊ ဘာသာရေးကျမ်းကြီးများ ကိုးကားပြော၍လည်း မှန်လှပြီမထင်လေနှင့် ၊ ပုံပန်းအမြင်သဏ္ဌာန် ကြည့်၍လည်း မဆုံးဖြတ်နှင့် ၊ ယော်ယမ်းမှန်းဆယူရသော သဘောထင်မြင်ချက်ကိုလည်း အမှန်ဟု မမှတ်ယူလေနှင့် ၊ ဖြစ်နိူင်ကောင်း၏ဟု ထင်မြင်ရရုံဖြင့်လည်း မယုံကြည်ပါလေနှင့် ၊ အသင်တို့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရာဆရာသမားဖြစ်ပေသည် ဟူသော သဘောကြောင့်လည်း မှန်လှပြီဟု တထစ်ချမမှတ်ကြကုန်ရာ ။
အို--- ကာလာမနွယ်ဘွား အမျိုးသားတို့ ၊ အချို့သော အကြောင်းတရားသည် အကုသိုလ်ဖြစ်သည် ၊ မမှန်ကန် ၊ မကောင်းကျိုးကို ဖြစ်စေသည်ဟု သင်တို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သိရှိ၏ ။ ထိုအကြောင်းတရားများကို စွန့်ပယ်ကြလေလော့ ...... ။ အချို့ ကြောင်းတရားများမှာမူ ကုသိုလ်ဖြစ်သည် ၊ ကောင်းသောကျိုးကို ဖြစ်စေသည်ဟု အသင့်တို့ ကိုယ်တိုင်သိကြ၏ ။ထိုကြောင်းတရားများကို နှစ်သက်စွာလက်ခံ၍ လိုက်နာကျင့်ကြံကြပေတော့ "...
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ထိုထက်ပင် လွန်ကဲ၍ ဆိုပေသေးသည် ။ တစုံတယောက်အား မိမိဆရာအဖြစ် လက်ခံလိုက်မည်ဆိုလျှင် တထာဂတ ကိုပင်သော်လည်း အမျိုးစစ် အဘိုးတန် မှန်မမှန် ထင်ရှားသိမြင်နိူင်ရန် သေချာစွာ စစ်ဆေးစမ်းသပ်လေ့လာသင့်သည်ဟု ထိုရဟန်းတို့အား မိန့်မြွက်ခဲ့လေသည် ။
ပုံမှန်လည်ပတ်နေတဲ့ ရာသီဥတု စက်ဝိုင်းထဲမှာ နွေ ၊ မိုး ၊ဆောင်း ရဲ့အလှတရားလေးတွေရှိနေသလို ဥပါဒ် ဋ္ဌီ ဘင် ( ဇာတိ ဇရာ မရဏ) ဆိုတဲ့ သင်္ခါရတရားလည်း ရှိနေတယ်ဆိုတာကို သတိထားမိဖို့လိုပါသည်။
ရွက်ဟောင်းများ ကြွေကျ၍ ရွက်သစ်တွေဝေနေတဲ့ နွေဦးမှာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး လန်းဆန်းနိူင်ကြပါစေ။.။
ရေးသူ ရွှေကြာ အချိန် 5/18/2009 06:30:00 PM0ဓမ္မဒါန Links to this post
ကာယကံ ကိုလည်း စောင့်ရှောက်သည်မည်၏ ။
၀စီကံ ကိုလည်း စောင့်ရှောက်သည်မည်၏ ။
မနောကံ ကိုလည်း စောင့်ရှောက်သည်မည်၏ ။
ကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မနောကံ ကို စောင့်ရှောက်သူ၏ ကံသုံးပါသည် ကိလေသာ မစိုစွတ်၊
ကိလေသာ မစိုစွတ်သော ကံသုံးပါးရှိသူသည် ၊
ကာယကံသည်လည်း မဆွေးမြေ့ ၊
၀စီကံသည်လည်း မဆွေးမြေ့ ၊
မနောကံသည်လည်း မဆွေးမြေ့ ၊
ကောင်းသော သေခြင်းဖြစ်နိူင်၏ ။
ကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်း ဖြစ်နိူင်၏ ။
ရေးသူ ရွှေကြာ အချိန် 5/11/2009 08:27:00 PM0ဓမ္မဒါန Links to this post
ရေးသူ ရွှေကြာ အချိန် 5/11/2009 06:21:00 PM0ဓမ္မဒါန Links to this post
ရှာလို့လဲ မတွေ့ ကြာလို့လဲ မမေ့သော အမေ
အမေ့မေတ္တာ ကျေးဇူးတရားတွေကို ခိုင်းနိူင်းတင်စား စာဖွဲ့ ကြတာ လောကဥပမာ အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ပါဘဲ ။ တကယ်လဲ ကြီးမားလှတဲ့ခိုင်မာတဲ့ မေတ္တာရှင် ဖြစ်ပါသည် ။
အဆုံးအစ မဲ့ ချစ်ခြင်းနဲ့ သာ သားသ္မီးတို့ကို ချစ်တဲ့ အမေ ပါ။ သိတတ်စရွယ်က စလို့ အသက်ရွယ် ကြီးတဲ့ ထိ ချစ်ခြင်းတွေ မပြောင်းလွဲတဲ့ အမေ။ လမ်းလျှောက်သင်စ အရွယ်တုံး က တလှမ်းချင်း လှမ်းလျှောက် သင်ပေးခဲ့ တာကို သတိယပြီး .. မိခင်အိုကြီး စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါ နွမ်းလျှပြီး လမ်းမလျှောက်နိူင်တဲ့ အခါ ခွန်အားပါတဲ့ လက်တစုံနဲ့ မိခင်အိုကို ကူတွဲ သင့်ပါသည်။
မိဘနှစ်ပါး၏ ဂုဏ်တော် အနန္တများသည် ....
(၁) သုဟဒယဂုဏ်-- ဆိုတဲံ အရိုး ၊ အကြော ၊ အသွေး သားထဲက စိမ့်ပြီးသားသ္မီးကိုချစ်ခြင်း ။
(၂) ဗြဟ္မာဂုဏ်--- ဆိုတဲ့ မေတ္တာ ၊ ဂရုဏာ ၊မုဒိတာ ၊ ဥပေက္ခာ လေးပါးနှင့် စောင့်ရှောက် ခြင်း ။
( ၃) ဇနေတ္တိဂုဏ်--- ဆိုတဲ့ အသက်စွန့် ပြီး မွေးသော အမေ ၊ အသက်စွန့်ပြီး ရှာ ကျွေးသောအဖေဖြစ်ခြင်း ။
(၄) ပေါသကဂုဏ်---ဆိုတဲ့ အေးမြပြီး သန့်ရှင်းကြည်လင်သော မိဘနှစ်ပါး၏အရိပ် ရခြင်း ။
(၅) ပေါသနန္တိဂုဏ် ----ဆိုတဲ့ လေပူနေပူ အအေးဒဏ်မျိုးစုံကို ကာကွယ်ပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခြင်း ။
(၆)ဒေဿတာရာဂုဏ်---ဆိုတဲ့ စကားပြောသင်ခြင်းမှအစ ဘုရားရှိခိုးနည်း ၊ဆွမ်းကပ်နည်း ၊ ကြီးသူကို ရိုသေငယ်သူကိုညှာတာတတ်အောင် သင်ကြားပေးခြင်း ။
(၇) အာပါဒကာဂုဏ်--- ဆိုတဲ့ ဘေးရန်ကင်းစေ ရန်အသက်စွန့်ပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောင့်ခြင်း ။
(၈) တေသယန္တိဂုဏ်---- ဆိုတဲ့ တေးသီချင်းတို့ဖြင့် သံငြိမ့်ညူးရင်း နှစ်သိမ့်တတ်ခြင်း ။
(၉) ပုဗ္ဗာဒေ၀တာဂုဏ်--- ဆိုတဲ့ အိမ်ဦးနတ် ဖခင် ၊မိခင် ဖြစ်ခြင်း ။
(၁၀)ပုဗ္ဗာစရိယဂုဏ်--- ဆိုတဲ့ လက်ဦးဆရာမည်ထိုက်စွာ စာရိတ္တမပျက်စီးစေရန် ဘာသာရေးနှင့် သိမ်းသွင်းခြင်း။
(၁၁)ဂေါပါယန္တိဂုဏ်---ဆို တဲ့ စားဝတ်နေရေး၊ ပညာရေး မပူပင်ရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးသော အေးသောအရိပ်ပေးခြင်း ။
(၁၂) အာယုနေယျဂုဏ် ---ဆိုတဲ့ ပစ္စည်း လေးပါးဖြင့် ကန်တော့ခံရသည် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်း ။
(၁၃)အနာမဋ္ဌဂုဏ် ---ဆိုတဲ့ ရဟန်းဆွမ်းမဘုဉ်းမပေးမိ မိဘနှစ်ပါးအား အရင်ဆုံး ဆွမ်းစားစေခြင်း အခွင့်ရရှိသောမိဘနှစ်ပါးဖြစ်ခြင်း အစရှိသောမိဘဂုဏ်(၁၃)ပါး တို့ဖြစ်၏။ ။
ထိုမျှသာမက လောက ဥပမာများမှာ
အမေ့ မေတ္တာ ၊ စမ်းရေပမာ နှင့် ၊ ပမာနိူင်းဆို မပြောလိုဘူး ၊ ထိုစမ်းရေမှာ ခန်းတတ်လို့ ။
အမေ့ မေတ္တာ ၊ လစန္ဒာနှင့် ၊ ပမာနိူင်းဆို ၊ မပြောလိုဘူး ၊ ထိုစန္ဒာ တိမ်လွှာ လွှမ်းတတ်လို့ ။
အမေ့ မေတ္တာ ၊ ပန်းရွှေကြာနှင့် ပမာနိူင်းဆို ၊ မပြောလိုဘူး ၊ ထိုပန်းရွှေကြာ နွမ်းတတ်လို့ ။
ရာသီမှာပွင့်တဲ့ ပန်းတွေ ညိုးနွမ်းတဲ့အခါ ရှိပေမဲ့ အမေ့မေတ္တာ ပန်းတွေ က လန်းဆန်းနေတာ အစဉ်အမြဲဆိုတာ ရွှေကြာ မိတ်ဆွေများ ကိုယ်တွေ့ခံစားဖူးကြပါသည် ။မသေချာတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ မသေချာခြင်းတွေ ရှိနေပေမဲ့ အမေ့မေတ္တာက သေချာနေမှာ အစဉ်အမြဲပါ။ အချိန်းတိုင်းမှာ အမေ့ရင်ထဲ ယိုစိးထွက်ကျလာတဲ့ မေတ္တာရေစီးချောင်းအနမ်းပွင့်လေးတွေ တပွင့်နဲ့တပွင့် ပွင့်ချင်းဆက်ပြီး ချော့သိမ့်မှုကိုခံရင်း အမေ့ရင်ခွင်ထဲ စိတ်ချလက်ချ သောကမရှိ ငယ်စဉ်ဘ၀ ကအိပ်ပျော်လာခဲ့ကြသည်မဟုတ်ပါလော ။ တသက်လုံး လုံခြုံမှုပေးစေခဲ့တဲ့ အမေ့မေတ္တာ.။ ဂရုဏာ ဒေါသနှင့် သားသ္မီးအပေါ် ပြောဆို ဆုံးမှခဲ့တာတွေ နူတ်တမျိုး တုတ်တဖုံ နဲ့ ဆိုဆုံးမခဲ့တဲ့ အချိန်က ထွက်မပြေးတတ်တာက . ရွှေကြာအကျင့်ပါ ပို၍သာ အမေ့ရင်ခွင် တိုးဝင်းကာ အားရပါးရ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုတတ်သူပါ။ အမေ့ရဲ့မေတ္တာ တွေ ဒေါသမှ အဒေါသသို ပြောင်းလွဲသွားပြီး ချော့မော့မှု ရခဲ့တာတွေဟာလည်း ဘာနဲ့မှ အစားထိုးမရတဲ့ နွေးထွေးတဲ့ အမေ့ရင်ငွေ့ပါါ။
ကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို အဖေဆိုတဲ့ မနက်ခင်းနေရောင်တွေလို နူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ နွေးထွေးမှုကို ပေးနိုင်တဲ့ ရွှေကြာရဲ့ နေမင်းကြီး က လောကကြီး ကို အစောကြီး ကြောခိုင်းသွားခဲ့ပါသည် ။ အဖေမရှိတဲ့ သားနဲ့ သ္မီးကို လူအလယ်တင့်တယ်အောင် လောကဓံကို အံတုဖတ်ပြိုင် ပြုရဲတဲ့ သူရဲကောင်းစိတ်ဓါတ် မွန်မြတ်တဲ့ စိတ်ထား အမေ့မေတ္တာကြီးမားလှပါ၏ ။ အကြောင်းအားလျှော်စွာ ရွှေကြာနိူင်ငံခြားသို့ သာသနာပြုရောက်လာခဲ့ သည် ၊ ဘ၀ရဲ့ လောကဓံရိုက်ချက်တွေ နဲ့ အခါ အားလျှော်စွာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည် ၊ စစ်မှန်တဲ့ အမေ့မေတ္တာတရားနဲ့ နွေးထွေးအောင်ရင်ငွေ့ပေးခဲ့တဲ့ အမေ့ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ တမ်းတမိပါသည်။ အမေဟာ ရွှေကြာနှင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက် ဘယ်တော့မှ လကွယ်နေ့ လဆုတ်နေ့ ဆိုတာမရှိဘဲ သာယာပြည့်ဖြိုးတဲံ့လပြည့်ညရဲ့လမင်းကြီးပင်ဖြစ်ပါသည်။
မိဘတိုင်းရဲ့ ဆန္ဒတွေ မေတ္တာတွေအားလုံးဟာ အတူတူပါဘဲ . ဒီတော့ ဘယ်လို မိဘကျေးဇူးကို ဆပ်ကြမလဲ ..?
တကယ်ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ သားသ္မီး ၊ တာဝန်ကျေတဲ့သားသ္မီး တယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုကျေးဇူးဆပ်ကြမလဲ ...?
လောကကြီးမှာ ရှာလို့လဲမတွေ့ . ကြာတော့လည်း မမေ့နိူင်တဲ့ အမေ့ကို . တာဝန်ကျေတဲ့ သားသ္မီးကောင်းတယောက်အနေနဲ့ ...
(၁) သဒ္ဓါတရားခေါင်းပါးသော မိဘနှစ်ပါးအား သဒ္ဓါတရားရှိလာအောင် တိုက်တွန်းပေးရမည် ။
(၂) သီလဆောက်တည်လိုစိတ်မရှိသော မိဘနှစ်ပါးအား သီလဆောက်တည် မှု ဖြစ်လာအောင် တိုက်တွန်းပေးရမည်။
(၃) နှမြောတွန့်တို၍ ပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်းမရှိသော မိဘနှစ်ပါးအား လှူဒါန်းပေးကမ်းခြင်လာအောင်တိုက်တွန်းပေးရမည်။
(၄) တရားမနာချင်သော ၊ တရားဘာဝနာနုလုံးမသွင်းချင်သော မိဘနှစ်ပါးအား တရားနာချင်လာအောင် ၊ တရားအားထုတ်ချင်လာအောင်တိုက်တွန်းပေးရမည်။
ဒီလိုတာဝန်ကျေသော သားသ္မီးများအား ပညာရှိသူတော်ကောင်းများ ချီးကျူးသည်မက ၊ ပစ္စုပ္ပါန်လောကီစည်းစိမ်ခံစားရပြီး သေသော်လည်းနတ်ရွာလားမည်ဖြစ်ကြောင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
ဓမ္မမိတ်တွေရဲ့ချစ်သောမိဘနှစ်ပါး မျက်မကွယ်ခင် မှာ ငါမပြုမိလိုက်ရလေခြင်းဟုသောနှောင်း နောင်တ တရားများ မရလေအောင် တာဝန်ကျေတဲ့ သားသ္မီးကောင်းများဖြစ်ပြီး မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ငါးပါးသီလတည်းဟူသော် ကိုယ်ကျင့်တရားများကို လုံအောင်ထိမ်းပြီး အချိန်မနှောင်ခင်း မိခင် ဖခင်တို့အားလည်း တိုက်တွန်းပေးရပါမည်။
မိုး- မိုးချူပ်ပေါ့ကွယ် ၊" (ပညာရှိရှေးဆရာတော်)
သံသရာခရီးသည်တွေ တစိုက်စိုက်နှင့် ခရီးဆက်နေလိုက်ကြတာ ...၀တ်ထားသောပုဆိုး မလုံ့တလုံနှင့် အပေါက်ပြဲများအား ဘယ်သို့လှည့်ဝတ်လှည့်ဝတ် မလုံနိူင်သလို ငါးပါးသီလမလုံဘဲ သံသရာခရီးသည်တွေ ခရီးဆက်ကြရင်း ဘယ်မှာအိပ်ကြမှာလဲ မိုးချုပ်တော့မယ် သံသရာခရီးသည် .တဲ့ ကျေးဇူးကြီးမားသော မိခင် ဖခင်ကြီးများအား .ဘ၀သံသရာမှ လွတ်မြောက်နိူင်ကြောင်း အထောက်အကူကိုလည်း မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်က ဖြည့်ဆည်းပေနိူင်ရပါမည် ။
မိခင်များဟာ သားသ္မီးများ အပေါ်မှာ မျော်လင့်ခြင်းဆိုတဲ့ အိမ်မက်များစွာနဲ့ ပြုစု ပျိုးထောင်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလော . သူတို့ စိုက်ပျိုးပြုစုလိုက်တဲ့ ပန်းကလေးတွေ ပွင့်နေတာ ၊ သီးနေတာ ၊ ကိုကြည့်ပြီး ကြေနပ်နေကြသူတွေပါ.ငါ့သားသ္မီးများကြီးလာရင် ငါတို့အား လုပ်ကြွေးပြုစု မွေးမြူပေလိမ့်မည်. ငါတို့ရဲ့ အမျိုးအဆက်ကို စောင့်ရှောက်ထိမ်းသိမ်းပြီးအမွေခံဖြစ်ပေလိမ်မည်ဟု အိမ်မက်တွေ ခဲ့ကြပါသည်။
အမေ့ ရဲ့ မျော်လင့်ချက် အိမ်မက်များကို နုလုံးသား ထပ်တူပြုပြီး နားလည်ကြအောင် ၊ အမေ့ အတွက်ပေးဆပ်ရမယ့် အချိန် ကန့်သတ် နည်းနည်း လေးကို တန်ဖိုးထားတတ်ကြလေအောင် ဤစာစုလေး ကို ရွှေကြာ မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။
အမေ့ရဲ့ ခြေအစုံ ကို ဦးတိုက်ရှိခိုး ကန်တော့လျှက်ရှိနေပါတယ်အမေ... .
ပြည်ပမှ" အမေ့ ချစ်သ္မီး ...ရွှေကြာ"
ရေးသူ ရွှေကြာ အချိန် 5/08/2009 10:32:00 PM0ဓမ္မဒါန Links to this post